မြန်ဇေဖို့ to expedite | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မြန်ဇေဖို့ to expedite
မြန်ဇေဖို့ to expedite
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 20, 2015 in Aha! Jokes, Satire | 12 comments
အပေါ်ပစ်တင်လိုက်တဲ့ အရာတခုဟာ ဘယ်လောက် အရှိန်ပြင်းဘာဇေ အမြင့်ဆုံးရောက်ပီးယဉ် ပျံကျဒါ ထုံးဈာန်။ အဲဒမှာ ကြက်သရေရှိရှိ ကြောင်ကျ ကျဒါနဲ့ ဒုံးဂနဲ ဗိုင်းဂနဲ့ ပစ်ကျတာ ကွာဒါ။ လောကဓမ္မတာ ဘယ်သူမှ အမြင့်ဇုံးရေဆူမှတ် ထိန်းမထားနိုင် စဂေါင်း။ ရဒယ်ဆိုဒါ လုပ်ကြံပြောတာ…။ မြန်တျန့်နိုင်ငံရေး အထင်ကရ ဘွားဒေါ်ဂျီးဘဲကြည့်.. အယဉ်ကလောက် ပေါ်ပြူ လာ ဖြစ်သေးရဲ့လားလို့၊ ဒါပေမဲ့ သူဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီကြောင့် ကြောင်ကျကျလေး လှလှပပ ကျသွားမှာ မြေဂျီးလာဘ်ခတ် မလွဲ…။
သူနဲ့ဗျောင်းဗျံ ဝီကိုယ်ဒေါ်ကတော့ ဘုံးကနဲ့ ဘိုင်းဂနဲ ကျတော့မည်ထင်ရဲ့။ မကျလည်း ကျအောင် စေတဏှာရှေ့ထား ဝိုင်းတွန်းပေးဂျဒါပေါ့စ်။ နည်းလမ်း အသွယ်သွယ် အပျင်းပြေ စဉ်းဆားကြည့်ရအောင်..
(၁) အဆင်းဘီးတပ် ဘေးလေးဆပ်
သူ့လေသံလိုက် မြှောက်ပေး တွန်းပေး ကလော်ပေး ဆဲပေး၊ လာဘ်ခုတ်လာဘ်ဝါးတီးပေး.. ပြီးတော့ မှောင်ရိပ်ခိုပြေး… ခြေရာလာဘ်ယာ မကျန်ဈေနဲ့။
(၂) အတိုက်ခံလုပ် ဒိုက်ဆန်ပြုတ်
သူနဲ့ဗျောင်းဗျံပြော၊ ဆန့်ကျင်ဖက် ချေပ…။ ဒေါသ ဘုန်းကြီးဆိုတော့ ရန်ဖြစ်လေ ဒေါကီးလေ… အမှားလုပ်လေ.. များများမှား မြန်မြန်ကျ။
(၃) အဖက်မလုပ် လဖက်သုပ်
ပြောသမျှ ပေလကန်ပြု အေးအေးလူလူ ရေနွးဂျန်းနဲ့ လဖက်သုပ် စားပီး အိပ်နေ ဘိက္ခဝေ။ ကြာတော့ ဟိုလူ့ ပတ်ဆဲ ဒီလူ့ ပတ်ဆဲနဲ့ ကိုယ်ဒေါ်ဂျီး လူ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်.. ဒါလည်း ကျဂျင်းတမျိုး..။
(၄) မြစ်တာဝေမျှ ကာလာမ
ဝီကို ဆန့်ကျင်ပြဒဲ့ အနေဏဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံ ကလာမလေးဒွေ ဖန်… ရုပ်ရှင်တူတူသွားကြည့် ပန်းခြံချိန်း လျောက်လည်.. ဓာတ်ပုံတွေ ဖဘမှတင်.. ဝီဝီ့အကောင့်ကိုပါ တက်ခ်လုပ်။ (ကလားထီးနဲ့ဒေါ့ မှောင်ရိပ်သွား မခိုလေနဲ့ ဟိုက လည်လှီးသွားလိပ်မဲ။ ဇဂချက်)
ဘာရယ် ဟုတ်ဝူး.. အွန်လိုင်းမှာ ဆွမ်းဂျီးလောင်းနေဂျဒါတွေ့ဒေါ့ မဘသ ကိုယ်ဒေါ်ဂျီးကို ဒတပ်ဒအား ဝင်လောင်းဒါ။ သာဓု အခေါ်နဲ့.. နရဲကျီးမျီ။
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်ဇလည်ကို ဝီဝီ ခိုင်းနှိုင်းပြောလိုက်ပုံကို ကြည့်ပြီး သုံးသပ်မိဒါ အန်အယ်လ်ဒီက ဆရာထင်လင်းဦး လွတ်တော့မည်ထင်ရဲ့။ သူ့ကို ထောင်မချဒေါ့ ငါလည်း သူ့လိုပဲ ဆဲတယ်ကွာဆိုပီး ခလေးကွက် ရွှေ့ပုံရဒယ်။ မဘသ အဖွဲ့ဂျီးတော့ ကြီးဗွားအုံးမယ်.. ငှိ ငှိ..။
.အောင်ကြူးကွန်မန့်ပေးလို့ရသွားပြီကိုး…ဂွတ် :boss:
.(၁) အဆင်းဘီးတပ် ဘေးလေးဆပ်
.(၂) အတိုက်ခံလုပ် ဒိုက်ဆန်ပြုတ်
.(၁) ကတော့ “၀ီနဲ့ကျောချင်းကပ်ထားဂျ” အော်အော်နေတဲ့ ဖားသက်ပြင်း ခေါ် ဦးဖွတ်ကျား လုပ်လိမ့်မယ်
.(၂) ကတော့ ကျုပ်လုပ်မယ် :boss:
-လဖက်သုပ် အစီစဉ် အကောင်းဆုံးဘဲ :-)
ကောင်းသားပဲ ဆက်လုပ် ဦးကြောင် :loll:
မီးဆိုတာကို.. လက်ပေါ်မကျခင်ကတည်းက.. ပူတယ်လို့..သိသင့်…။
မြစ်တာဝေမျှ တာ ကောင်းမယ်ထင့်
သူများစွန်းဂျီးလောင်းတာတောင် နည်းမျိုးဇုံနဲ့ ဗျူဟာနဲ့
ဒင်းသင်ပေးတဲ့ ပြင်ညာ တွေ နဲ့ အဆိုးရ မင်းများ (၃) အဖက်မလုပ် လဖက်သုပ် နည်း ကို အခု သုံး နေလား မသိ။
သူရို့ အတော် ဂေါင်းကောင်း လာပြီ။
ဒုံးပေလိုက် ပြီး တုံး နေတာက တစ်ချို့သော “သား” များ။
သား မှ သုံး သားလုံး ဘဲ။
ဗမာစာကို ပီသအောင် ရေးရတယ်။ နောင်လူတွေ ဒီလိုရေးကုန်ကြရင် ဗမာစာ ဗမာစကား ပျောက်သွားမယ်နော့… ဥညောင်ဂျီး…:mrgreen: